ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း. ဆော့ဝဲလ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို ဗားရှင်းသတ
ⓘ ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း. ဆော့ဝဲလ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို ဗားရှင်းသတ်မှတ်ခြင်း ပုံစံ သည် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၏ ယခင်အခြေအနေနှင့် မတူညီဘဲ သီးသန့်ဖြစ်သည့် အခြေအနေအသစ်တစ ..
ဆော့ဝဲလ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို ဗားရှင်းသတ်မှတ်ခြင်း ပုံစံ သည် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၏ ယခင်အခြေအနေနှင့် မတူညီဘဲ သီးသန့်ဖြစ်သည့် အခြေအနေအသစ်တစ်ရပ်ကို ရည်ညွှန်း၍ ထို ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲသို့ မတူညီဘဲ သီးသန့်ဖြစ်သော ဗားရှင်းအမည်များ ဗားရှင်းနံပါတ်များ ကို သတ်မှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ပေးထားသော ဗားရှင်းနံပါတ်အမျိုးအစား အတွင်းတွင် ဤနံပါတ်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် တိုးမြှင့်သွားရန် သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး ဆော့ဝဲလ်၏ တိုးတက်မှုအသစ်များနှင့်အညီ ဆက်လက် သတ်မှတ်သွားရန် ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များအရ တည်းဖြတ်မူထိန်းချုပ်မှု များသောအားဖြင့်မတူညီသောအချက်အလက်များ၏ဗားရှင်းများကိုဤအချက်အလက်သည်ကွန်ပျူတာဆော့ ဝဲ ဟုတ်မဟုတ်ကို ခြေရာခံရန်အသုံးပြုသည်။
ယနေ့ခေတ် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲများကို ကွဲပြားခြားနားသော ဆော့ဖ်ဝဲ ဗားရှင်းသတ်မှတ်နည်း အစီအစဉ် နှစ်မျိုး သုံး၍ စောင့်ကြည့်ကြသည်။ တစ်မျိုးမှာ ဌာနတွင်း ဗားရှင်းနံပါတ် Internal Version Number ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် တစ်နေ့တည်းတွင် ဆော့ဖ်ဝဲ အဆင့်မြှင့်တင်မှုပေါ် မူတည်ပြီး များစွာ တိုးတက်သတ်မှတ်ထားနိုင်သည် ဥပမာ- တည်းဖြတ်မူထိန်းချုပ်မှု။ နောက်တစ်မျိုးမှာ ယခင်နည်းလမ်းကဲ့သို့ အလွန်တရာ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲ စနစ်တကျ ဗားရှင်းကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း သို့မဟုတ် ပရောဂျက်ကုဒ်အမည်ကို သုံး၍ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည့် ထုတ်ဝေသည့် ဗားရှင်း ဖြစ်သည်။
1.1. အစီအစဉ်များ အရေးပါမှုကိုပြောင်းလဲပါ
အချို့သောအစီအစဉ်များတွင်ထုတ်လွှတ်မှုအကြားပြောင်းလဲမှု၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြရန် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံပြီးအမှတ်အသားများကိုအသုံးပြုသည်။ အပြောင်းအလဲများကိုအရေးပါမှုအဆင့်အရခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး၊ ထုတ်လွှတ်မှုအကြားပြောင်းလဲရန်မည်သည့်အစဉ်လိုက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်ယခင်လွှတ်ပေးမှုမှအပြောင်းအလဲများ၏အရေးပါမှုကိုအခြေခံသည်။ ပထမဆုံးသိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများအတွက်ပထမစီးရီးကိုပြောင်းလဲပြီးပထမကိုယ်စားပြုပြီးနောက်ပာပြောင်းလဲမှုများကိုမူတည်သည်။ လျော့နည်းသွားအရေးပါမှု၏အပြောင်းအလဲများကို။
အစီအစဉ်ပေါ်မူတည်၍အရေးပါမှုကိုကုဒ်နံပါတ်များပြောင်းလဲခြင်း၊အလုပ်အမှတ်များထပ်ဖြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဗားရှင်းအသစ်ကိုချမှတ်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ၊ အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ကြေငြာခြင်းမရှိသောချိုးဖောက်ခြင်းအပြောင်းအလဲများ၊ အမြင်အာရုံအပြင်အဆင်၏ပြောင်းလဲမှုအတိုင်းအတာအားဖြင့်အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသို့မဟုတ်ဈေးကွက်ရှာဖွေသူများကမူထုတ်ကုန်သစ်ကိုအလေးထားရန်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဆန္ဒအပါအဝင်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများသို့မဟုတ်ဈေးကွက်ရှာဖွေသူများကသိသာထင်ရှားသည်ဟုယူဆကြသည်။
အဓိပ္ပာယ်ဗားရှင်း ခေါ် SemVer ဤအမျိုးအစားတွင်လူသိအများဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးလက်ခံကျင့်သုံးသောဗားရှင်းအစီအစဉ်တွင်ဂဏန်းသုံးလုံးတွဲ Major ကိုအသုံးပြုသည်။ အသေးစားဖါအမှတ်အသားကြိုတင်ဖြန့်ချိမှုနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာသတ္တုအမှတ်အသားတို့ဖြစ်သည်။ ဒီအစီအစဉ်မှာအန္တရာယ်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအရေးပါမှု၏အစီအမံများမှာ။ ချိုးအပြောင်းအလဲများကိုအဓိကအရေအတွက်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြသည်အသစ်သောချိုးဖောက်မှုမရှိသောအင်္ဂါရပ်များသည်အသေးစားအရေအတွက်အလယ်အလတ်အန္တရာယ်နှင့်အခြားချိုးဖောက်မှုမရှိသောပြောင်းလဲမှုအားလုံးသည်ဖါနံပါတ်အနိမ့်ဆုံးစွန့်စားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ကြိုတင်ဖြန့်ချိသည့်အမှတ်အသားအက္ခရာစဉ်၊ဘီတာရှိနေခြင်းအဓိကအားဖြင့်သုည ၀.၀၇ကဲ့သို့ကြီးမားသောအန္တရာယ်ကိုဖော်ပြသည့်အပြောင်းအလဲများ အမြင့်ဆုံးအန္တရာယ်ကိုချိုးဖောက်မည်ဖြစ်သည်။
တီထွင်သူများအနေဖြင့်သိသာထင်ရှားသောလုပ်ဆောင်ချက်များထည့်သွင်းထားကြောင်းကိုပြသရန်အသေးစားဗားရှင်းများစွာကိုခုန်ကူးရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်အဓိကဗားရှင်းနံပါတ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ခိုင်လုံခြင်းမရှိပေ။ ဥပမာ ၅.၁ မှ ၅.၅ မှ အင်တာနက်စူးစမ်းသူ သို့မဟုတ် အဒိုဘီ ဖိုတိုရှော့ ၅ မှ ၅.၅ ဆော့ဝဲ အသုံးပြုသူအဆင့်မြှင့်တင်မှုတန်ဖိုးကိုအလေးပေးရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အဒိုဘီဗားရှင်းကဲ့သို့အဓိကဗားရှင်းများအကြားတစ်ဝက်ဖြန့်ချိခြင်းကိုကိုယ်စားပြုရန် ရောနှောနေခြင်း ဗားရှင်းကဲ့သို့ပင်ဆက်တိုက် အခြေခံဗားရှင်းဂဏန်းတစ်ခုတည်းနှင့်သာကန့်သတ်မထားပါ ၅.၇။
ကွဲပြားသောနည်းလမ်းမှာဖြန့်ချိမှုအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းသည့်အက္ခရာနံပါတ်ပါသည့်စာလုံးများနှင့်အတူ အဓိက နှင့် အသေးအဖွဲ နံပါတ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - alpha a, beta bသို့မဟုတ် "ခန့်ဒစ်လ်ထုတ်ဝေ" rc ဤချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုသော ဆော့ဝဲဖြန့်ချိရေးရထား တစ်ခု၀.၅၊ ၀.၆၊ ၀.၇၊ ၀.၈၊ ၀.၉ → ၁.၀ဒီဝမ်းလ်၊ ၁.၀ဒီတူးလ် အချို့သောပြင်ဆင်မှုများနှင့်၊ ၁.၀ဒီတရီးလ်ပိုမိုပြုပြင်မှုများနှင့်→ ၁.၀အာစီးဝမ်း ဖြစ်နိုင်လျှင်တည်ငြိမ် လျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၁.၀အာစီတူးလ် ကြမ်းပိုးများထပ်မံတွေ့ရှိပါက→ ၁.၀။ ဤအစီအစဉ်တွင်အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုသော့ခတ်ခြင်းနှင့်လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျှောက်ထားသောအဆင့်များအတွင်းပြောင်းလဲမှုများကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်အချို့သောအဖွဲ့ဘီတာများသည်တောင်မှပစ်မှတ်ဖြန့်ချိမှုအပေါ်ပေါင်းစည်းမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်အမှားပြင်ဆင်မှုများကိုသာသော့ခတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဓိကအသေးစားတည်ဆောက် တည်းဖြတ်မူ ဥပမာ - ၁.၂.၁၂.၁၀၂ အဓိကအသေးစားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတည်ဆောက် ဥပမာ - ၁.၄.၃.၅၂၄၉
တနည်းကားဒီဥပမာထဲမှာ "အသေးအဖွဲ" ပြောင်းလဲမှုဆန့်ကျင်အဖြစ် "အဓိက" ပါဝင်သောအရာ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုလုံးဝပုဂ္ဂလဒိနှင့်ရေးသားသူမှတက်သည် "တည်ဆောက်" အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်အဘယ်သို့သကဲ့သို့ သို့မဟုတ် "တည်းဖြတ်မူ" နဲ့ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦး "အသေးစား" ပြောင်းလဲမှု။
နေရောင်ခြည်နှင့်ဆာဗာရှိမျှဝေစာကြည့်တိုက် လက်ရှိတည်းဖြတ်မူခုနှစ် ပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်။
လက်ရှိ စာကြည့်တိုက်မှအကောင်အထည်ဖော်သောနောက်ဆုံးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် နံပါတ်။ တည်းဖြတ်မူ လက်ရှိဆက်သွယ်ရေးစနစ် ကိုအကောင်အထည်ဖော်မှုအရေအတွက်။ ခုနှစ် စာကြည့်တိုက်မှအကောင်အထည်ဖော်သောနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အဟောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်များအကြားခြားနားချက်။ တတိယအကွက်ကိုဤ လစ်လ်ကရိယာတွင် အသုံးပြုသည်။ အခြားသူများကမူအခြားအဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုနိုင်သည်။
အလားတူပြဿနာ၊အလားတူပြောင်းလဲမှုနာနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးမူကွဲအမှတ်အသား၏ကွဲပြားခြားနားသောစံနှုန်းများအပေါ်မူတည်၍ ထုတ်ဝေမှုနံပါတ်များသို့မဟုတ်အမည်များကိုရွေးချယ်နိုင် သည့်စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းတွင်ရှိသည်။
စီးပွားဖြစ်ဆော့ ဖ် ဝဲအများစုတွင်ပထမဦး ဆုံးဖြန့်ချိသောဆော့ဝဲထုတ်ကုန်၏ဗားရှင်း ၁ တွင်ရှိသည်။
1.2. အစီအစဉ်များ ကိုက်ညီမှုဒီဂရီ
အချို့သောစီမံကိန်းများကသဟဇာတမဖြစ်သည့်ထုတ်လွှင့်မှုကိုဖော်ပြရန်အဓိကဗားရှင်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာနှစ်ခုသည် အာပါချဲလ်အိတ်ဆောင်အချိန် APR နှင့် FarCry CMS တို့ဖြစ်သည်။
ဝေါဟာရဗားရှင်း သည်အဓိကဗားရှင်းဖြစ်ပြီးအပိုင်းသုံးပိုင်းပါသောနံပါတ်ကိုသုံး၍ လိုက်ဖက်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ရန်အတွက်တရားဝင်သဘောတူညီမှုဖြစ်သည်။ အသေးစားဗားရှင်းနှင့်ဖါဆော့ဝဲ၏ လျှောက်လွှာပရိုဂရမ်းမင်းအင်တာဖေ့စ API ကိုမပြောင်းလဲစေသည့်အသေးစားပြောင်းလဲမှုများနှင့်အမှားပြင်ဆင်မှုများအတွက်ဖါနံပါတ်ကိုတိုးပွားစေသည်။ အသေးအဖွဲဗားရှင်းအသစ်များထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသောဖြန့်ချိမှုများအတွက်တိုးချဲ့ထားသော်လည်းနောက်ပြန် - သဟဇာတဖြစ်သော API အင်္ဂါရပ်များနှင့်အဓိကဗားရှင်းသည်နောက်ပြန်သဟဇာတမဖြစ်သည့် API ပြောင်းလဲမှုများအတွက်တိုးချဲ့ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် APIဗားရှင်း ၂.၁.၅ ကိုအမှီပြုသည့် ဆော့ဝဲဗားရှင်း ၂.၂.၃ နှင့်အဆင်ပြေသော်လည်း ၃.၂.၄ နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
များသောအားဖြင့်ပရိုဂရမ်မာများသည်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်များကို နောက်ပြန်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ရေးတတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဆော့ ဖ် ဝဲအသစ်သည်ဆော့ဖ်ဝဲဟောင်းပရိုတိုကောအဟောင်းများနှင့်ဖိုင်ပုံစံများကိုသုံး၍ နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုတိုကောဖိုင်ပုံစံများကို အသုံးပြု၍မှန်ကန်စွာအပြန်အလှန်ရေးဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ IBM z / OS ကိုစနစ်တကျလည်ပတ်နေသောစနစ်အဓိကဗားရှင်း ၃ ခုနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မြင့်မားသောရရှိနိုင်သည့် ကွန်ပျူတာစပျစ်သီးကိုသုံးသူများအားကွန်ပျူတာများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပိတ်ထားခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများရှိစဉ်တွင်ကွန်ပျူတာအများစုကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
များသောအားဖြင့် အစုံလိုက်ခေါင်းစီးများ နှင့် ဖိုင်ပုံစံ တွင်ဗားရှင်းနံပါတ်ပါရှိသည် - တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရေးသားခဲ့သောဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းနံပါတ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး အခြားအချိန်များ၌ ဆော့ဝဲဗားရှင်းနံပါတ်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ "အတိုင်းအတာဗားရှင်းနံပါတ်" ဖြစ်သည်။ ယခင် အသုံးမပြုတော့သော ပရိုတိုကောလ် များ နှင့် ဖိုင်ပုံစံများက်ို ကိုင်တွယ် သည့်ကုဒ်ကို cruft ခရတ်ဖ် အဖြစ် မကြာခဏမြင်တွေ့ရသည်။
1.3. အစီအစဉ်များ တိုးတက်မှု သတ်မှတ်ခြင်း အဆင့်
စမ်းသပ်အဆင့် အယ်လ်ဖာ ဒါမှမဟုတ် ဘီတာ ရှိဆော့ဝဲများသည်မကြာခဏယင်းအဆင့်ကိုဖော်ပြရန်အတွက်ဆက်တိုက်ပထမအဓိက အနေအထားတွင်သုညအသုံးပြုသည်။ သို့သော်ဤအစီအစဉ်သည်အစောပိုင်းအဆင့်များအတွက်သာအသုံးဝင်သည်၊ ဗားရှင်းနံပါတ်ပြီးဆုံးသွားသောထူထောင်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အတူထုတ်ဝေတော့မည်မဟုတ်ပေ။
ကိန်းဂဏန်း ၉၀+ နံပါတ်များကိုသုံးသောအခြားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သို့သော်ယခင်ဗားရှင်းအချို့အောက်တွင်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေအထားတွင်များသောအားဖြင့် ၉၀ နှင့်အထက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို GNOME နှင့် ဖေါင့်ဒီးလ်ခွန်ဖစ်လ် ကဲ့သို့ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများကအများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
ကိန်းဂဏန်းအဆင့် ဆိုသည်မှာနံပါတ်များကိုကိန်းဂဏန်းအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသည်အနေအထားလေးခုကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်တတိယနေရာဖြစ်သည်။
အက္ခရာနံပါတ်များပါ နောက်ဆက် တစ်ဝက်မှချမှတ်သောဘုံအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်တွင်ဗားရှင်းများအဆင့်ကိုညွှန်ပြရန်ဒဲက်ပေါင်း၍ အက္ခရာနံပါတ်များပါသောအက္ခရာများကိုကပ်ထားသည်။
ဂဏန်းသက်သက်သာသာပုံစံနှစ်ခုတစ်ဝက်တွင်တွေ့ရသော "alpha < beta < rc < no prefix" နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုရှင်းလင်းရန်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အထူးယုတ္တိဗေဒကိုဖယ်ရှားသည်။ ဆင်လ်ဝေအမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဆင့်များအတွက်တိကျသောအသုံးအနှုန်းများကိုသတ်မှတ်မထားဘူးနှိုင်းယှဉ်အတွက်ရိုးရိုးဖြစ်ပါတယ်။
1.4. အစီအစဉ်များ တိုးပွားလာသောနံပါတ်စဉ်များ
ဂဏန်းဗားရှင်းနံပါတ်များမည်သို့တိုးပွားလာသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အတွေးကျောင်းနှစ်ခုရှိသည်။ မီဒီယာဝီကီ နှင့်အခမဲ့သောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲ အထုပ်ဗားရှင်းများကိုတစ်ဦးချင်းနံပါတ်များအဖြစ်ကာလအပိုင်းအခြားများဖြင့်ခွဲခြားသည်။ တိုးတက်မှု ၁.၇.၀၊ ၁.၈.၀၊ ၁.၈.၁၊ ၁.၉.၀၊ ၁.၁၁.၀၊ ၁.၁၁.၁၊ ၁.၁၁.၂ နှင့်စသည်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအချို့သောဆော့ဝဲ အထုပ်များသည်ဒသမနံပါတ်များအားဖြင့်ဖြန့်ချိခြင်းကိုဖော်ထုတ်သည်။ ၁.၇၊ ၁.၈၊ ၁.၈၈၊ ၁.၈၂၊ ၁.၉ စသည်တို့ ဥပမာအားဖြင့် NetWare, DOS နှင့် Microsoft Windows များတွင် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌အဖြစ်များခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များ၌ပင် အော်ပရာ နှင့် Movable Type တို့တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒschemeမအစီအစဉ်တွင် ၁.၈၁ သည် ၁.၈ အောက်ပါအသေးစားဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ပြန်ချက်များဆိုလိုသည်မှာအမှားပြင်ဆင်မှုများကို 1.81a သို့မဟုတ် 1.81b ကဲ့သို့သောအက္ခရာစဉ်အတိုင်းဖော်ပြနိုင်သည်။
စံ GNU ဗားရှင်းနံပါတ်အစီအစဉ်သည်အဓိကအသေးစားတည်းဖြတ်မှု သို့သော် Emacs အဓိကနံပါတ်၁ကျဆင်းသွားပြီး သုံးစွဲသူဆိုဒ် တည်းဖြတ်ခြင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်၊ မူရင်း Emacs အထုပ်များတွင်အမြဲတမ်းသုညမဟုတ်သည့်အခြားအစီအစဉ်ကို အသုံးပြု သည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အလားတူစွာ၊ Debian အထုပ်နံပါတ်များသည်မူကွဲအစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့်ရွေးချယ်စရာယုဂ်နှင့်ရှေ့ဆက်ထားသည်။
1.5. အစီအစဉ်များ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်တီထွင်သူများသည်အဓိကဗားရှင်းနံပါတ်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိုတခါတရံတွင်ဖြန့်ချိသောအသစ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Minecraft Alpha သည်ဗားရှင်း ၁.၀.၀ မှ ၁.၂.၆သို့ပြေးခဲ့ပြီးဘီတာကိုထုတ်သောအခါအဓိကဗားရှင်း နံပါတ်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး ၁.၀ မှ ၁.၈ သို့ပြေးသည်။ ဂိမ်းအပြည့်အဝဖြန့်ချိပြီးသည်နှင့်အဓိကဗားရှင်းနံပါတ်သည် ၁.၀.၀ သို့ပြန်သွားသည်။
1.6. အစီအစဉ်များ နံပါတ်စဉ်များကို ခြားခြင်း
ပုံနှိပ်သောအခါ နံပါတ်စဉ်များကို အက္ခရာ များနှင့် ခြားကောင်းခြားနိုင်ပါသည်။ အက္ခရာ ရွေးချယ်မှုတို့ အသုံးပြုမှုကိုအစီအစဉ်အရကွဲပြားသည်။ အောက်ပါစာရင်းသည်ထပ်တူလွှတ်ခြင်းအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာယူဆချက်နမူနာများတတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ပြင်ဆင်မှုကိုစတုတ္ထဒုတိယအဆင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဒုတိယအဆင့်ပထမအဆင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြသည်။
အစီအစဉ်၏အက္ခရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်တူညီသော နံပါတ်အမှတ်အသား အတွင်း တွင် တစ်သတ်မတ်တည်း မဖြစ်နိုင်ပါ - ၂.၄_၁၃
အစီအစဉ် တွင် နံပါတ်စဉ် ကြားခြာရန် ရွေးချယ်မှုသည် တစ်သတ်မတ်တည်း မဖြစ်နိုင်ပေ။ တချို့နံပါတ် များအား ခြားပီး တစ်ချို့ကို တစ်ဆက်တည်းရေးထားနိုင်သည်။ ၂.၄၁၃
အစီအစဉ်အားလုံးသည်အစီအစဉ်များအားလုံးအကြားတူညီသော အက္ခရာ ကို သုံးနိုင်သည်။ ၂.၄.၁၃၊ ၂/၄/၁၃၊ ၂-၄-၁၃
နံပါတ်စဉ် များကို ခြားရန် period. ကို အသုံးပြု ခြင်းသည် ဒသမကိန်းကို ကိုယ်စားပြုခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် သလို မဖြစ်နိုင်ပေ။ အမျိူးမျိူးသော အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းများကို "တိုးပွားလာသောနံပါတ်စဉ်များ" အခန်းတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
1.7. အစီအစဉ်များ နံပါတ်စဉ်အရေအတွက်
တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ကအသုံးပြုသည်ကဲ့သို့ ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်မှု ကိုရည်ညွှန်းသည့်စတုတ္ထမထုတ်ဝေသောနံပါတ်တစ်ခုရှိသည်။ Adobe Flash ၁၀.၁.၅၃.၆၄ ကဲ့သို့လေးပိုင်းပါသောဗားရှင်းနံပါတ်ကိုလူသိရှင်ကြားဖော်ပြသည့်ထင်ရှားသောအမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများတည်ဆောက်မှုနေ့စွဲလည်းပါဝင်သည်။ ဗားရှင်းနံပါတ်များတွင်အက္ခရာများနှင့် Lotus ၁-၂-၃ Release 1a ကဲ့သို့သောအခြားစာလုံးများပါဝင်နိုင်သည်။
1.8. အစီအစဉ်များ အနှုတ်လက္ခဏာနံပါတ်များကိုအသုံးပြုခြင်း
အချို့သောစီမံကိန်းများတွင်အပျက်သဘောဆောင်သောဗားရှင်းနံပါတ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ၁.၀ မှအထက်သို့ ၀.၀ အထိရေတွက်သော SmartEiffel compiler ဖြစ်သည်။
1.9. အစီအစဉ်များ ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်
စီမံကိန်းတော်တော်များများသည်ပြက္ခဒိန် ဗားရှင်းခေါ် CalVer ဟုခေါ်သောရက်စွဲအခြေခံသည့်ပုံစံထုတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ အူးဘွန်းတုလင့်နု ပြက္ခဒိန်ပုံစံပြုခြင်းကိုသုံးသောစီမံကိန်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအူးဘွန်းတု ၁၈.၀၄ ကို ၂၀၁၈ ဧပြီးလတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးဇယားများနှင့်အထောက်အကူပြုအချိန်ဇယားများနှင့်အလွယ်တကူဆက်စပ်နိုင်ခြင်း၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ အချို့ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည်ရက်စွဲကိုဗားရှင်းအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာ အာခေပ်လ်ဂိမ်း Street Fighter EX ဗားရှင်းနံပါတ်ကိုရက်နံပါတ်အနေနှင့်ကုဒ်နံပါတ် ဖော်ပြသည် ဥပမာ 961219 ASIA ။
ဥပမာအားဖြင့်ဖိုင်အမည်များကိုဗားရှင်းတွင်အသုံးပြုသောအခါ ISO 8601 အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ YYYY-MM-DD၊ အမိန့်များကိုတိုးမြှင့်လျှော့ချရန်အလွယ်တကူစီထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တုံးတိုများကိုတစ်ခါတစ်ရံချန်လှပ်ထားသည်။ ယခင်က ဝိုင် စီမံကိန်းသည်ရက်စွဲဗားရှင်းအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည့် နောက်နှစ်ထွက်သည့်နေ့နောဥပမာအားဖြင့် "ဝိုင် 20040505" ။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ရုံး နံပါတ်များသည်ကုဒ်နံပါတ်ဖြစ်သည်။ ပထမဂဏန်းနှစ်ခုကစီမံကိန်းစတင်သည့်နှစ်ဇန်နဝါရီ လမှစ၍ လတ်တလောရုံးခွဲသစ်တစ်ခုစီသည်မတူညီသောစီမံချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဂဏန်းနှစ်လုံးသည်ထိုလ၏နေ့ကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းစတင်သည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်း ၃၄၁ ရက် ၁၉ ရက် ၃၄၁၉ ဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဘာသာပြန်ဆိုသောအခြားဥပမာများတွင် Adobe Illustrator 88 နှင့် WordPerfect Office 2003 တို့ပါဝင်သည်။ ရက်စွဲကိုဗားရှင်းဟုညွှန်းရန်အသုံးပြုသောအခါဈေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ဗားရှင်းနံပါတ်လည်းရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၉၅ ကိုပြည်တွင်း အမ်အက်စ်-ဒေါ့စ် ၇.၀၀ နှင့် ဝင်းဒိုးစ် ၄.၀၀ တို့ဖြင့်ပုံစံထုတ်ထားသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးစ် ၂၀၀၀ ဆာဗာ ကို Windows NT 5.0 ဗားရှင်းထုတ်ကုန်အမည်ကိုရည်ညွှန်းသည့်အနေဖြင့်အတွင်းပိုင်းတွင် အသုံးပြု သည်။
1.10. အစီအစဉ်များ ပိုင်သန် Python
အဆိုပါ Python Software Foundation က ထုတ်ဝေခဲ့သော ဗားရှင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်မှီခိုမှုအသေးစိတ်PEP 440, တွင် epoch segment တစ်ခုအား သတ်မှတ်ပေးသော သူတို့ကိုယ်ပိုင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အစီအစဉ်များ | ဖြန့်ချိရေးအပိူင်း | pre-release နှင့် Post-release အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တိုးတက်မှု ဖြန့်ချိရေး အစိတ်အပိုင်း များ ဖော်ပြထား ပါသည်။
1.11. အစီအစဉ်များ TeX
TeXတွင် ထူးခြားသောဗားရှင်းနံပါတ်စနစ်ရှိသည်။ ဗားရှင်း ၃ ကတည်းကဗားရှင်းမြှင်တင်မှုများကိုအဆိုပါဗားရှင်းနံပါတ်ဒီတော့အကြောင်း, အဆုံးမှာအပိုဂဏန်းထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြခဲ့ကြ အချိုးမညီ ချဉ်းကပ် π အော်ပရေတာစရင်း ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းနံပါတ်သည်ဂဏန်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိဗားရှင်း 3.14159265 ဖြစ်ပါတယ်။ စာသားအလွန်တည်ငြိမ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်မျှသာအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုမျှော်လင့်ထားပါသည်။ စာသားတီထွင်သူ တိုနောင်လ်နူ က သူသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံး အပြောင်းအလဲကဗားရှင်းနံပါတ်သို့ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ကြမ်းပိုးတွေအားလုံးဟာအမြဲတမ်းလက္ခဏာတွေဖြစ်လာမှာပါ။
အလားတူပင်, METAFONT ၏ဗားရှင်းအရေအတွက်ကအချိုးမညီ အီး။
1.12. အစီအစဉ်များ အက်ပဲ
အက်ပဲမှာ NumVersion struct ကိုအခြေခံပြီးတရားဝင်ဗားရှင်းနံပါတ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်၊ ဒီဟာကဂဏန်းတစ်လုံးနှစ်လုံး၊ အဓိကဗားရှင်းဂဏန်းအသေးအဖွဲဗားရှင်းဂဏန်းတစ်လုံး "ကြမ်းပိုး"ဗားရှင်း၊ set development / prealpha, alpha, beta နှင့် final / release) နှင့် one-byte ဆိုလိုသည်မှာ ၀-၂၅၅ အကွာအဝေးအတွင်းရှိတန်ဖိုးများရှိခြင်းမှနောက်ဆုံးမတိုင်မီအဆင့်များတွင်သာအသုံးပြုသော pre-release version မှဖြစ်သည်။ ဤဗားရှင်းနံပါတ်များကိုကြိုးများအဖြစ်ရေးသားရာတွင်၊ စည်းဝေးကြီးသည်တန်ဖိုးသုည နောက်ဆုံးသုညအဆင့်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အငယ်စားဗားရှင်းနောက်မှမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုချန်လှပ်ထားခြင်းဖြင့် ၁.၀.၂ ၁.၀.၂ ခ ၁၂ အစား ၁.၀ ကိုရေးသည်။21.0.2f0 ထက်နှင့် 1.1 1.1.0f0 ထက်
1.13. အစီအစဉ်များ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးစ်
အဆိုပါ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးစ်ကို ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်ပထမဦးဆုံးအများအတွက်စံဗားရှင်းနံပါတ်များနှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည် ကို Windows 1.0 ကတဆင့် Windows 3.11 ဒီပြီးနောက်မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ကထုတ်ကုန်နာမည်မှဗားရှင်းနံပါတ်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ Windows 95 ဗားရှင်း ၄.၀၊ ၀ င်းဒိုး ၉၈ ၄.၁၀နှင့် Windows 2000 ၅.၀အတွက်မူထုတ်ကုန်ခေါင်းစဉ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Windows 2000 အပြီးတွင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် ၀ င်းဒိုးဆာဗာ မိသားစုကိုနှစ်အလိုက်ပုံစံဖြင့်ကွဲပြားခြားနားစွာတီထွင်ခဲ့သည်။ အသေးအဖွဲထုတ်ဝေမှုများအတွက်မူ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်" R2” ခေါင်းစဉ်နှင့်ဥပမာ Windows Server 2008 R2 ဗားရှင်း ၆.၁ ကိုထပ်မံပေးခဲ့သည်။ ဒီစတိုင်ကဒီရက်စွဲနှင့်ကိုက်ညီနေဆဲဖြစ်သည်။ ဝင်းဒိုးစ်ဗားရှင်းများတသမတ်တည်းသောပုံစံကိုမကျင့်သုံးခဲ့ကြပါ။ ပထမဦးစွာသူတို့သည် Windows ME 4.90, Windows XP ၅.၁နှင့် Windows Vista 6.0 ကဲ့သို့သောအက္ခရာနံပါတ်ပါသည့်နောက်ဆက်တွဲအမည်များကိုရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဝင်းဒိုးစ်ခေါင်းစဉ်တွင်ထပ်တိုးနံပါတ်များကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်မူဗားရှင်းနံပါတ်များမဟုတ်ပါ။ Windows 7, Windows 8 နှင့် Windows 8.1 တို့၏နံပါတ်များသည် ၆.၁၊ ၆.၂ နှင့် ၆.၃ ဖြစ်သည်။ ၀ င်းဒိုး ၁၀ တွင်ဗားရှင်းနံပါတ်သည် ၁၀.၀ သို့ခုန်ဆင်းသွားပြီး OS ၏နောက်ဆက်တွဲနောက်ဆုံးသတင်းများသည် တည်ဆောက်မှုနံပါတ်နှင့်တိုးမြှင့်တည်ဆောက်မှုတည်းဖြတ်ခြင်း UBR အရေအတွက်ကိုသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
1.14. အစီအစဉ်များ အခြားအစီအစဉ်များ
အချို့သောဆော့ဝဲထုတ်လုပ်သူများတို့၏ ဆော့ဝဲကိုလွှတ်ပေးရန်အတွက်ကွဲပြားသောအစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ Debian ပရောဂျက်ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်ကိုထုတ်လွှတ်ရန်အတွက်အဓိက / အသေးစားဗားရှင်းအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်၊ သို့သော်တည်ငြိမ်။ မတည်မငြိမ်နှင့်စမ်းသပ်မှုထုတ်လွှတ်မှုများကိုရည်ညွှန်းရန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကာလအတွင်းရုပ်ရှင် Toy Story မှကုဒ်အမည်များကိုအသုံးပြုသည်။
BLAG Linux နှင့် GNU သည်အလွန်ကြီးမားသောဗားရှင်းနံပါတ်များပါရှိသည် - အဓိကဖြန့်ချိမှုများသည် ၅၀၀၀၀ နှင့် ၆၀၀၀၀ ကဲ့သို့နံပါတ်များရှိသည်။ Alpha နှင့် beta ထုတ်ပြန်ချက်များသည်အဓိကဖြန့်ချိသည့်အရေအတွက်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းသောဒသမဗားရှင်းနံပါတ်များဖြစ်သည်။ ဥပမာ 20099 alpha 1 အတွက် 19999.00071 နှင့် beta2အတွက်ဗားရှင်း 30000 အတွက် 29999.50000 ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ၉၀၀၁ မှစတင်ခဲ့ပြီး၂၀၁၁နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲ 140000 ဖြစ်ပါတယ်။
ဆော့ ဖ် ဝဲတွင်ကုန်ပစ္စည်းအမည်တွင်ပြထားသောဗားရှင်းနံပါတ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော "အတွင်းပိုင်း" ဗားရှင်းနံပါတ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Java SE 5.0 တွင် ၁.၅.၀ အတွင်းပိုင်းဗားရှင်းနံပါတ်ရှိပြီး Windows4မှ NT4ဗားရှင်းများသည်စံသတ်မှတ်ထားသည့်ကိန်းဂဏန်းဗားရှင်းများကိုပြည်တွင်း၌ဆက်လက်အသုံးပြုကြသည်။ Windows 2000 မှာ NT 5.0၊ XP သည် Windows NT 5.1, Windows Server 2003 နှင့် Windows တို့ဖြစ်သည်။ XP Professional x64 Edition သည် NT 5.2၊ Windows Server 2008 နှင့် Vista - NT 6.0၊ Windows Server 2008 R2 နှင့် Windows7- NT 6.1၊ Windows Server 2012 နှင့် Windows 8 - NT 6.2၊ Windows Server 2012 R2 နှင့် Windows 8.1 - NT 6.3 သို့သော် Windows 10 ၏ပထမဗားရှင်း သည် 10.0 10.0.10240 ဖြစ်သည်။ သို့သော်သတိပြုရန်မှာ Windows NT ၏ပထမအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာသည့် ၃.၁ ထိုစဉ်ကလက်ရှိထုတ်လုပ်မှုနံပါတ်နှင့်ကိုက်ညီသည့်နံပါတ် ၃၁ ဖြစ်ပြီး Windows 10 လွှတ်တင်မှုသည် ၆.၃ မှ ၁၀.၀ သို့ဗားရှင်းသို့ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်သောကြောင့်ပဉ္စမအဓိကပြင်ဆင်မှုတွင်သာရှိသည်။
3. အကြိုဖြန့်ချိ ခြင်း ဗားရှင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗားရှင်းအမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များနှင့်တွဲဖက်၍ ပရိုဂရမ်သည် software release life cycle အဆင့်များသို့သွားသောကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အကြိုလွှတ်ဗားရှင်းများကို ဆိုလိုသည်။
အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ရှိသောပရိုဂရမ်များကိုဂရိအက္ခရာပထမစာလုံးအပြီးတွင် "အက္ခရာစဉ်" ဆော့ဝဲဟုမကြာခဏခေါ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့ရင့်ကျက်သော်လည်းမဖြန့်ချိမီအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပြီးနောက်ဂရိအက္ခရာတွင်ဒုတိယအက္ခရာပြီးနောက်သူတို့ကိုဘီတာ ဆော့ဝဲဟုခေါ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဘီတာဆော့ဝဲကိုတီထွင်သူများမှသာစမ်းသပ်သည်။ ဘီတာဆော့ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ဖြန့်ဝေသည်။
အချို့သောစနစ်များသည် ၁.၀ ထက်နည်းသော ဥပမာ 0.9 ကဲ့သို့ကိန်းဂဏန်းဗားရှင်းများကို အသုံးပြု၍ နောက်ဆုံးထုတ် "၁.၀" လွှတ်ပေးရေးကိုချဉ်းကပ်ရန်အကြံပြုကြသည်။ ၎င်းသည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် ဆော့ဝဲလ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ကြိုတင်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံသည်လက်ရှိ ဆော့ဝဲအထုပ်အတွက်ဥပမာ ၂.၅အတွက်ဖြစ်ပါက "a" သို့မဟုတ် "alpha" ကိုမူနံပါတ်သို့ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် 2.5 ဖြန့်ချိမှုဘီတာဗားရှင်းကို 2.5a ဒါမှမဟုတ် 2.5.a.
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာမူဖြန့်ချိခြင်းမပြုလုပ်မှီဗားရှင်းများကို" လွတ်တမ်း ကိုယ်စားလှယ်များ” အဖြစ်ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာဗားရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့်မကြာမီထွက်ပေါ်လာမည့် ဆော့ဝဲအထုပ် များသည်ထိုဗားရှင်းအမှတ်အသားကိုသယ်ဆောင်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက် rc- # ကနောက်တွင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏နံပါတ်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ; နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြန့်ချိသောအခါ "rc" အမှတ်အသားကိုဖယ်ရှားသည်။
4. ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဖြန့်ဖြူးပုံ Release Train
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဖြန့်ဖြူးပုံ Release Train သည် ဆော့ ဖ် ဝဲဖြန့်ချိရေး အစီအစဉ်၏ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်မျိုးစုံအတွက် ဗားရှင်းဆော့ဖ်ဝဲလ် ထုတ်လွှင့်မှုအမျိုးမျိုးကို ပုံမှန်အချိန်ဇယားတွင်ကွဲပြားသော" ရထားများ”ကဲ့သို့ အစီအစဉ်အလိုက် ထုတ်ဝေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ထုတ်ကုန်လိုင်းတစ်ခုစီအတွက် ကွဲပြားခြားနားသော ရထားအမြောက်အများသည် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင် ပြေးနေသည်။ ရထားတစ်ခုချင်းစီသည် ကနဦးလွှတ်ခြင်းမှ နောက်ဆုံးရင့်ကျက်မှု နှင့် အငြိမ်းစားယူရန် စီစဉ်ထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အသုံးမပြုမီ အသစ်ထုတ်လွှတ်သော ရထားနှင့် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သည်။ အသစ်ဖြစ်သော "raw" နှင့် စမ်းသပ်မှုပြုရန် စောစောစီးစီးလွှတ်သည်။ ရထားအသစ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များအတွက်ယခင်ရထား၏ လွှတ်ပေးသည့်အတိုင်း လိုက်နာသည်။
Cisco ၏ IOS ဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲပြားခြားနားသောရထားများနှင့်အတူလွှတ်ထားသောရထားအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အပါအဝင်တခြားပလက်ဖောင်းပိုမကြာသေးမီကတစ်အရေအတွက်က Firefox ကို Android အတွက်နှင့် Fenix, Eclipse, LibreOffice, Ubuntu ကို, Fedora, Python ကို, digiKam နှင့် VMware က လွှတ်ပေးရန်ရထားပုံစံကိုကျင့်သုံးသည်။
5.1. ဂဏန်းစနစ်ပြုပြင်မွမ်းမံ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြန့်ချိမှုအတွက်မရေမတွက်နိုင်သောဗားရှင်းများ
အဆိုပါ 1.0 နှင့် 2.6.x စီးရီးများအကြား, အ Linux kernel ကိုအသုံးပြု ထူးဆန်း denote ဖှံ့ဖွိုးတိုးတထုတ်နှင့်အသေးစားဗားရှင်းနံပါတ်များကို ပင် တည်ငြိမ်လွှတ်ပေးဖျောညှနျးဖို့အသေးစားဗားရှင်းနံပါတ်များကို; လင့်နစ်လ်မလစ်လ် § ဗားရှင်းနံပါတ် ကိုကြည့်ပါ။ Linux kernel § Version numbering ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Linux 2.3 သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယအဓိကပုံစံဒီဇိုင်းမှာ kernel ဖြစ်ပြီး၊ Linux 2.4 သည်တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်သည့်မိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစားဗားရှင်းနံပါတ်ပြီးနောက် Linux kernel မှထွက်လာသောနံပါတ်ကိုဖြန့်ချိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Linux 2.4.0 → Linux 2.4.22 ၂.၄ kernel ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်ဖြန့်ချိကတည်းက Linux သည်ဤစနစ်ကိုအသုံးမပြုတော့တော့ပါ။
အလားတူထူးဆန်းသည့်စနစ်ကိုအချို့ဆော့ ဖ် ဝဲ လ် ကရှည်လျားသောထုတ်လုပ်မှုသံသရာများဖြစ်သောဥပမာ - ဗားရှင်း ၀.၁၂ အထိ Node.js နှင့် GNOME နှင့် WineHQ တို့ကို အသုံးပြုသည်။
5.2. ဂဏန်းစနစ်ပြုပြင်မွမ်းမံ အက်ပဲလ်
Mac OS ခေတ်အခါက အက်ပဲသည် ကိုယ်ပိုင်နည်းနာဖြင့် ကျင့်သုံးခဲ့ဖူးသည်။ အစဉ်အလာဗားရှင်းနံပါတ်များနှင့်မတူဘဲ ၁.၀ မှ ၁.၀ နှင့် ၂.၀ အကြား လမ်းတစ်ဝက် မဟုတ်ပါ ကသေးငယ်သောထုတ်လွှတ်မှုအရေအတွက် ၁.၂၂ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ၁.၂၂နှင့်မတူဘဲ အက်ပဲလ်ဂန္ထဝင် Mac OS အသေးစားဗားရှင်းများသည် အမှတ် ၁ ထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ သူတို့လုပ်သည့်အခါတွင် သူတို့သည် point-5 ကိုနှစ်ကြိမ်ခုန်ဆင်းပြီး ထုတ်လွှတ်မှုသည် ပိုပြီးသိသာထင်ရှားတယ်ဆိုပြီး အကြံပြုခဲ့တယ်။ ပြင်ဆင်ချက် patches version များ မပါဝင်သော ဂန္ထဝင် Mac OS ဗားရှင်းများ၏ အစဉ်လိုက်မှာ ၁.၀၊ ၁.၁၊ ၂.၀၊ ၂.၁၊ ၃.၀၊ ၃.၂ ၃.၁ ကိုကျော်သွားသည့် ၄.၀၊ ၄.၁၊ ၅.၀, ၅.၁, ၆.၀၊ ၇.၀၊ ၇.၁၊ ၇.၅၊, 8.1, 8.5ခုန်တက်၈.၆၊ ၉.၀၊ ၉.၁၊ ၉.၂ ထို့ကြောင့် "၈.၅" ကို ကိုယ်ပိုင်ရှစ် နှင့် တစ်နှစ်ခွဲဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ၈.၆ မှာ ၈.၅.၁ ဖြစ်သည်။
Mac OS X (macOS ဟုအမည်ပြောင်းပြီးကတည်းက ဤလမ်းကြောင်းမှထွက်သွားသည်။ များသောအားဖြင့် "X"ရောမနံပါတ် ၁၀ထုတ်ကုန်အမည်တွင်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့် OS X ဗားရှင်းအားလုံးသည်နံပါတ် ၁၀ မှစတင်သည်။ ပထမဦးဆုံး OS X ကို ဖြန့်ချိမှုမှာ မူနံပါတ် ၁၀.၀ ဖြစ်သည့်အစား ဗားရှင်း ၁၀.၁နောက်မှ ၁၀.၂၊ ၁၀.၃ နှင့်နောက်ဆက်တွဲအဓိက ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုအတွက် အမည်ပေးခဲ့သည်။
ဤစနစ်တွင် တတိယနံပါတ် ဒုတိယအစား အသေးအဖွဲဖြန့်ချိမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ စတုတ္ထနံပါတ် တတိယအစားသည် bug-fix / တည်းဖြတ်မူလွှတ်ပေးရန်ကို ဆိုလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပထမနံပါတ်သည်အမြဲတမ်း ၁၀ ဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲကိန်းများသည် ဒသမမဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် OS X ၏ ၁၁ ခုမြောက်ဗားရှင်းကို" ၁၁.၀” အစား" ၁၀.၁၀” ဟု မှတ်သားထားခြင်းဖြစ်သည်။ macOS 10.12 အဖြစ် "X" ကို နာမည်မှထုတ်ပယ်ခဲ့သော်လည်း ဤနံပါတ်အစီအစဉ်သည် macOS 10.15 မှတဆင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။အက်ပဲလ်ရဲ့လာမယ့် MacOS ပြုရန်ယာယီသဘောတူညီချက် ရရှိထားပြီး လွှတ်ပေးရန်, ၁၀.၁၆ ရေတွက် ကိုတရားဝင်ဇွန်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အတွက် ဒီနှစ်မှာလည်းမှာ MacOS ၁၁.၀ အဖြစ် ကြေငြာခဲ့သည်။
6.1. ဗားရှင်းနံပါတ်များ၏နိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု ဗားရှင်း ၁.၀ ကိုမှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနှင့်
အခမဲ့ဆော့ ဖ် ဝဲ နှင့် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် အသိုင်းအဝိုင်းများသည်ဆော့ဖ်ဝဲကို စောစီးစွာနှင့်မကြာခဏထုတ်ပြန် လေ့ရှိသည်။ ကနဦး ဗားရှင်းများသည် ၁ ထက်နည်းသောနံပါတ်များဖြစ်သည်။ ဤ ၀.x ဗားရှင်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲသည်မပြည့်စုံကြောင်းနှင့်တိုးတက်နေဆဲအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။
ဗားရှင်း ၁.၀ ကိုအဓိက မှတ်တိုင် အဖြစ်အသုံးပြုပြီးဆော့ဗ်ဝဲသည်ပြီးပြည့်စုံသည့်အဓိကအင်္ဂါရပ်အားလုံးရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဖြန့်ချိရန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အရာအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဤဥပမာ၏ကောင်းမွန်သောဥပမာမှာ Linux kernel ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဗားရှင်း ၀.၀၁ အဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး နှင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိဗားရှင်း ၁.၀၀ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
တီထွင်သူများ၏ Arcade ဂိမ်း emulator MAME အစဉ်အဆက်ရှိတယ်အမြဲပိုပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ဦးဗားရှင်းကိုပရိုဂရမ်များ၏ ၁.၀ လွှတ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ကြပါဘူး Arcade ဂိမ်း အတုယူရန်နှင့်စီမံကိန်းကိုအမှန်တကယ်ပြီးစီးလိမ့်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါထို့ကြောင့်ဗားရှင်း ၀.၉၉ ကို ၀.၁၀၀ ဖြင့်လိုက်ခဲ့သည်။
အချို့သောစီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲရောင်းချသူများသည် ၁.၀ ဖြန့်ချိမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်လာမည့်ဗားရှင်းနံပါတ်နှင့်အတူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြန့်ချိခြင်းကိုဖောက်သည်အများစုကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုယုံကြည်ရန်မရင့်ကျက်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
6.2. ဗားရှင်းနံပါတ်များ၏နိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖြစ်ဗားရှင်းနံပါတ်များ
ပုံမှန်အားဖြင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဗားရှင်းနံပါတ်များကိုအဓိကခုန်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ dBase II ကဲ့သို့ပင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုမူကွဲနံပါတ်ဖြင့်ထုတ်သည်၊ ပို၍ရင့်ကျက်သည်ဟုဆိုရမည်ဒါပေမယ့်တခြားအကြိမ်ဗားရှင်းနံပါတ်များကိုပြိုင်ဘက်များ၏ကိုက်ညီရန်တိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။
Microsoft၊ America Online ၊ Sun Solaris Java Virtual Machine, SCO Unix, WordPerfect တို့၏ထုတ်ကုန်ဗားရှင်းနံပါတ်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ Microsoft Access Microsoft Word ဗားရှင်းနံပါတ်နှင့်ကိုက်ညီရန် ဗားရှင်း ၂.၀ မှဗားရှင်း ၇.၀ သို့ခုန်ဆင်းခဲ့သည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကလည်းအတူ မှီးအောင် ဗားရှင်းပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သည် ကို Netscape ဘရောင်ဇာများမှမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့နှင့်အညီ၆ မှဗားရှင်း ၅ ခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည် က Internet Explorer, ဒါပေမယ့်လည်း Mozilla ကလျှောက်လွှာအစုံကိုယင်းအတွက်ဗားရှင်း ၅ အမွေဆက်ခံသောကြောင့်, အသုံးပြုသူအေးဂျင့် ကို pre-၁.၀ စဉ်အတွင်း ကြိုးကိုတီထွင်သူနှင့် Netscape 6.x တို့ကို Mozillaကုဒ်အခြေခံပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Slackware ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး Linux ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဗားရှင်းကို ၇ ဗားရှင်း ၄ မှခုန်ချသည့်အခါပြိုင်ဘက်အတူတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်
6.3. ဗားရှင်းနံပါတ်များ၏နိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု အက်ပဲလ်
အက်ပဲလ်တွင်မူဗားရှင်းနံပါတ်ခုန်ကျော်ခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်ပုံစံတစ်ခုရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံတွင်ဈေးကွက်အတွင်းရောမဂဏန်း X အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ QuickTime နှင့် Final Cut Pro နှစ်ခုလုံးသည်ဗားရှင်း ၇ မှဗားရှင်း ၁၀ သို့တိုက်ရိုက်တက်သည်။ Mac OS X ကဲ့သို့ပင်ထုတ်ကုန်များသည်ယခင်ဗားရှင်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ QuickTime X နှင့် Final Cut Pro X ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသောပရိုဂရမ်အသစ်များမဟုတ်သော်လည်းအက်ပဲလ်၏ desktop operating systems များနှင့်မတူသည့်အဓိကဗားရှင်း ၈ နှင့် ၉ တွင်မရှိခဲ့ပါ။ OS X ကဲ့သို့ပင်သေးငယ်သောဖြန့်ချိခြင်းကိုဒုတိယဂဏန်းအစားတတိယဂဏန်းကို အသုံးပြု၍ ရည်ညွှန်းသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ ဤပရိုဂရမ်များအတွက်အဓိကထုတ်ဝေမှုများမှာအက်ပဲလ် X နှင့် အက်ပဲလ် တို့ကဲ့သို့ဒုတိယဂဏန်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ WWDC ၂၀၁၆ တွင် Mac OS X ကို macOS ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
Sun ၏ Java ကို ကြိမ်မှာပြည်တွင်းရေးဗားရှင်းနံပါတ်အစဉ်အမြဲ ၁. က x ခဲ့ပေမယ့်ကိုသာ x ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်ထားပြီးဘယ်မှာဟိုက်ဘရစ်စနစ် ရှိခဲ့ပါတယ်:
၁.၄.၂ မှတဆင့် J2SE ၁.၂.၀ "ဂျာဗား 2"
၁.၁.၈ မှတဆင့် JDK ၁.၁.၂
ဂျာဗား ၁.၅.၀၊ ၁.၆.၀ ၊၁.၇.၀၊ ၁.၈.၀ "ဂျာဗား ၅၊ ၆၊ ၇။ ၈"
နေသည်လည်းနေရောင်ခြည်အတွက်ပထမဆုံးဂဏန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုတွင် နေရောင်ခြည် ၂.၈ သို့မဟုတ် ၂.၉ ကို နေရောင်ခြည် ၈ သို့မဟုတ် ၉ ကိုဈေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများတွင်ဖော်ပြသည်။
အလားတူခုန်ယင်း ခရေပွင့် စီမံကိန်းကိုဆောင်လက်ရှိဗားရှင်းကို ၁.၈.x မကြာမီဗားရှင်း ၁၀. သဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အစောပိုင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ Open-source ကို PBX ဆောက်လုပ်ရေးကိရိယာအစုံ။
ဗားရှင်းနံပါတ်၏အခန်းကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သက်သော semantic အရေးပါမှုကိုချိုးဖောက်သောကြောင့်များစွာသောလူများကဤချဉ်းကပ်မှုကို Mozilla Firefox အတွက်အပါအဝင်ရောင်းချသူတိုးများလာသည်။
7.1. အထင်ရှားဆုံးဒြပ်စင်ဖယ်ရှားခြင်း အယူသီးမှု
ABBYY Lingvo အဘိဓာန်တွင်နံပါတ် ၁၂၊ x3 ၁၄၊ x5 15 ကိုအသုံးပြုသည်။
Sybase သည်အဓိကဗားရှင်း ၁၃ နှင့် ၁၄ ကို Adaptive Server Enterprise relational database ထုတ်ကုန်ဖြင့်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ၁၂.၅ မှ ၁၅.၀ သို့ပြောင်းခဲ့သည်။
Microsoft Office ၂၀၁၇တွင်ဗားရှင်းနံပါတ် ၁၂ ခုပါရှိသည်။ လာမည့် Office ၂၀၁၀ တွင်အတွင်းပိုင်းဗားရှင်း ၁၄ ရှိပြီးနံပါတ် ၁၃ နှင့်ပတ်သက်သော အယူသီးမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Visual Studio ၂၀၁၃ထုတ်ကုန်ဗားရှင်းနံပါတ် ၁၂.၀ ဖြစ်ပြီးဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သောဗားရှင်းနံပါတ် ၁၄.၀အကြောင်းပြချက်များနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Roxio Toast သည်နံပါတ် ၁၃ မှနံပါတ် ၁၃ ကိုကျော်သွားပြီးနံပါတ် ၁၃ နှင့်ပတ်သက်သောအယူသီးမှုများကိုကျော်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
SUSE Linux Enterprise သည်ဗားရှင်း ၁၃ နှင့် ၁၄ ကိုကျော်လွန်ပြီး ၁၂၊ ပြီးနောက်ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈ တွင် SLES 15 ကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Corel ၏ WordPerfect ရုံး ၊ ဗားရှင်း ၁၃ ကို "X3" ရောမနံပါတ် ၁၀ နှင့် "3" အဖြစ်ရောင်းချသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုနောက် version X4 သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ Corels Graphic Suite ဥပမာဆိုလိုသည်မှာ သည်လည်းထပ်တူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် CorelDRAW, Corel Photo-Paint) နှင့်၎င်း၏ ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးဆော့ ဖ် ဝဲ "ဗွီဒီယိုစတူဒီယို" ။
7.2. အထင်ရှားဆုံးဒြပ်စင်ဖယ်ရှားခြင်း ဒိ့ယဉ်ကျေးမှု
Finnix သည် ၉၃.၀ မှ ၁၀၀ သို့ကျော်သွားကာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် Windows 95 အတွက်ရည်ညွှန်းထားသော" ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ Finnix 95” ဆိုသည့်အချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Tagged Image ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း ပုံစံကို သတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ် ၄၂ အဖြစ် ပြည်တွင်းရေးဗားရှင်းနံပါတ် စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကဒီဇိုင်နာများကယင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်မယ်လို့ကတည်းကသူတို့ရဲ့ သို့မဟုတ်ယင်းတစ်သက်တာကာလအတွင်းတော့ဘူးကြောင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်မျှော်လင့်။
Slackware Linux ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ၁၃.၃၇ ဗားရှင်းကိုရည်ညွှန်းပြီး leet ကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဒေါက်ဂလပ်အဒမ် ၏ ကလက်လ်စီလ်ပွာမှုကိုဖော်ပြခဲ့သော SUSE Linux ဖြန့်ချိ မှုမှာ ၄.၂ မှ ၄၂ ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သော အရာအားလုံးတို့၏အဖြေကိုစတင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်တွင်အမြန်ဆုံးတိုးတက်လာသော CMMS Maximo သည် Maximo Series3မှစီးရီး ၅ သို့တိုက်ရိုက်ရွေ့သွားပြီးနံပါတ် ၄ သေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်တရုတ်ဈေးကွက်တွင်အရောင်းအဝယ်အခက်အခဲများကြောင့်စီးရီး ၄ ကိုကျော်သွားသည် tetraphobia သို့သော် Maximo Series ၅ ဗားရှင်း ၄.၀ ကိုထုတ်ဝေခြင်းကိုမရပ်တန့်စေပါ။ စီးရီး" ဗားရှင်း ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး စီးရီး ၅ ဗားရှင်း ၁.၀ ထွက်ပြီးနောက်ဗားရှင်းနံပါတ်များကိုထိရောက်စွာပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ဗားရှင်းနံပါတ်များကိုစားသုံးသူ သို့ သုံးစွဲသူ မှလက်တွေ့အသုံးအနှုန်းများဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထုတ်ကုန်များ၏မိတ္တူများကိုတီထွင်သူမှထုတ်ပေးသောနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ပရိုဂရမ်မာသူသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအတွက်မူဗားရှင်းကိုမကြာခဏပူးတွဲ ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင် မကြာခဏအတူတူ ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲ၏တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ထိုအစိတ်အပိုင်းများအသစ်များသို့မဟုတ်အဟောင်းတွေတည်းဖြတ်မူများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြသည်ရှိရာပြန်လည်သုံးသပ် -by-revision အခြေခံပေါ်မှာအသုံးပြုသည်။
၂၁ ရာစုတွင်ပရိုဂရမ်မာများများက semantic versioning policy ကဲ့သို့သောတရားဝင်မူကွဲမူဝါဒကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပေါ်လစီများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအခြားပရိုဂရမ်မာများအနေဖြင့်ကုဒ်ပြောင်းလဲမှုများသည်သူတို့ရေးသားထားသောအရာများကိုချိုးဖောက်နိုင်သည့်အချိန်ကိုသိရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ မူဝါဒ software libraries နှင့် framework များအတွက်အထူးအရေးကြီးသော်လည်း command-line applications အခြား application များမှခေါ်ခြင်းခံရနိုင်သည့်အခြား application scripts သို့မဟုတ် third party များမှတိုးချဲ့နိုင်သည်အတွက်လည်းလိုက်နာရန်အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သည်။
ဗားရှင်းနံပါတ်များသည်အထောက်အပံ့ပေးသူများကိုအသုံးပြုသူ မည် သည့်ကုဒ်နံပါတ်ကို အတိအကျ သိရှိနိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ပြaနာ၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြေရှင်းပြီးသောကြမ်းပိုးမ်ားနှင့်တူသည်။ အထူးသဖြင့်ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းအလုံအလောက်ကြီးသောအခါနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသောလူများသည်ကုဒ်ရေးသူများ မဟုတ်ပါ ကပရိုဂရမ်တွင်သိသိသာသာအသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည့်အခါအထူးအရေးကြီးသည်။ အဆိုပါ semantic အဓိပ္ပာယ်ကို ဗားရှင်းတည်းဖြတ်မူပြောင်းလဲမှုစတိုင်တွေကိုနံပါတ်ကိုလည်းမကြာခဏဘယ်လောက်အာရုံစိုက်မှုဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့စက်ရုံထဲမှာစေလွှတ်မတိုင်မီအသစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိဖို့ပေးဆောင်ဖို့လိုတယ်သုတေသနမှအသုံးပြုရန်အဘယ်သူသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင်ဝန်ထမ်းများရန်အရေးကြီးပါသည်။ များသောအားဖြင့်အပြောင်းအလဲများလေကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ချိုးဖောက်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများလေလေ (Changelog ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လျှင်အပေါ်ယံသို့မဟုတ်ဆီလျှော်သောပြောင်းလဲမှုများကိုသာဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဤအချက်သည် Asterisk et alia ၏အဓိကထုတ်လွှတ်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာအချို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ဝန်ထမ်းများသည်နောက်ဆုံးသတင်းတိုင်းအတွက်ပုံမှန်ဆုတ်ယုတ်မှုစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရမည်။
အချို့သော ကွန်ပျူတာဖိုင်စနစ်များ ဖြစ်သော OpenVMS Filesystem သည်လည်းဖိုင်များအတွက်ဗားရှင်းများကိုသိမ်းထားသည်။
စာရွက်စာတမ်းများအကြားဗားရှင်းဖွင့်ခြင်းသည်ကွန်ပျူတာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများတွင်အသုံးပြုသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အတော်လေးဆင်တူသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံပါဝင်မှုများသို့မဟုတ်အခြေအနေများတွင်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်စီနှင့်အတူဗားရှင်းနံပါတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေါ် မူတည်၍ ထပ်တိုးခြင်းသို့မဟုတ်တန်ဖိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုသေးသောသို့မဟုတ်ပိုကြီးသောတန်ဖိုးကိုတိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ရေးသား သူ၏ဦးစားပေးမှုနှင့်လုပ်ပြောင်းလဲမှုများ၏အရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရေးပါမှုကို။
12. ဗားရှင်းနံပါတ်စဉ် စဉ်ခြင်း စနစ်များ
ဗားရှင်းနံပါတ်များသည်အလွန်လျင်မြန်သောကိန်းများမှ 1, 2. မှရာရှင်နယ်နံပါတ်များ ၂.၀၈၊ ၂.၀၉၊ ၂.၁၀ သို့၊ ၄: ၃.၄.၃-၂ ကဲ့သို့သောကိန်းဂဏန်းမဟုတ်သောဂဏန်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ဤရှုပ်ထွေးသောဗားရှင်းနံပါတ်များကို character strings များအဖြစ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (ဥပမာ - အသေးအဖွဲမဟုတ်သည့် Linux သို့မဟုတ် BSD ဖြန့်ဖြူးမှုများအားလုံးပါဝင်သောလည်ပတ်မှုစနစ်များသည်မတူညီသောဆော့ဝဲလ်အထုပ်များ၏ဗားရှင်းနံပါတ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်သီးသန့် algorithm ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဥပမာ Red Hat ၏အမှာစာ algorithms နှင့်ဆင်းသက်လာသောဖြန့်ဝေမှုများသည် ဒေဗစ်ကဲ့သို့ဖြန့်ဝေမှုများနှင့်ကွဲပြားသည်။
Debian တွင်ထူးခြားသောဗားရှင်းနံပါတ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အမိန့်ပေးသောဥပမာဦးဆောင်သုညများကိုအစုအဖွဲ့များတွင်လျစ်လျူရှုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၅.၀၀၀၅ နှင့် ၅.၅ ကိုတန်းတူအဖြစ်သတ်မှတ်သည် 5.5